Social Distancing များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်း Shopping ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာ တွင် ပိုမို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြ - Shop
Social Distancing များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်း Shopping ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာ တွင် ပိုမို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြ0276
The KaungHtet March 25, 2020 5:15 am March 25, 2020
Social Distancing များပြားလာသည်နှင့်အမျှ အွန်လိုင်း Shopping ကုမ္ပဏီများသည်အွန်လိုင်းဈေးဝယ်ရာ တွင် ပိုမို စိတ်ချလုံခြုံစွာ ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လာကြ
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ သတိထားမှုများတိုးပွားလာခဲ့ပါသည် ….
COVID19 ရောဂါပျံ့နှံ့မှုအားကြောက်ရွံ့မှုနှင့်အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လည်း မရေရာမှုများနှင့် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရပါသည်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ ထောက်ခံချက်များအရ ပြည်သူလူထုများသည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တာဝန်များနှင့် အဆက်ဖြတ်လိုက်ကာ social distancing များပြားလာမှုကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဝယ်ယူသူများထံ တိုက်ရိုက်ရောင်းချဖို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်လာပါသည်။
e-commerce ပလက်ဖောင်းများကတော့ ဘယ်မှာ ရပ်တည်နေလဲ?
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရနိုင်ငံများအနေဖြင့် ပြင်ပအရောင်းဆိုင်များသို့ သွားရောက်ဝယ်ယူမှုမှာလည်း မဖြစ်မနေလိုအပ်မှသာ သွားရောက်ဝယ်ယူသည်ကို တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါသည်။
တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားသည့် နိုင်ငံများဖြစ်သော ပြင်သစ်၊ အီတလီ နှင့် စပိန်တို့ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများတွင် ပြည်သူလူထုများသည် တရားဝင် ထောက်ခံချက် စာရွက်များ မရှိပါ ကအိမ်အပြင်ထွက်ခြင်းများကို တားမြစ်ထားပြီး၊ အခြေခံလိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်ယူမှုများပိုမို များပြားလာခဲ့ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် မြန်မာနိုငံမှာလည်း အွန်လိုင်းမှ ဈေးဝယ်ယူမှုများ ပိုမိုများပြားလာပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင် ဦးဆောင်နေသော Shop.com.mm သည် Customer များ၏ အခြေခံကုန်ပစ္စည်းများသော ဆန်၊ ဂျုံ၊ ခေါက်ဆွဲ၊ ဆပ်ပြာ၊ သန့်စင်ဆေး၊ သကြား၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ စည်သွပ်ဗူးများ၊ ကလေးအာဟာရဖြည့်စွက်များ ၊ မျက်နှာပြင် သန့်ရှင်းရေး ပစ္စည်းများ ၊ ကလေးသေးခံများ၊ လက်ဆေးဆပ်ပြာများနှင့် ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ရန် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်း ကို အသုံးချပြီး ဈေးနှုန်းမြင့်တက်ရာင်းချမှုများကို Shop.com.mm Platform မှ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ အခြားအရေးယူမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ဒါ့အပြင် Shop.com.mm ပေါ်တွင် ရောင်းချနေသော Seller များကိုလည်း လုပ်ငန်းဆက်လက် လည်ပတ်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။
Shop.com.mm မှပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသူများသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကအကြံပြုထားသော ကာကွယ်မှုများကို ထိရောက်စွာလိုက်နာပြီး ဝယ်ယူသူများထံသို့ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပို့ဆောင်ပေးပါသည် ။
ဖြန့်ဖြူးသော ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ဖောက်သည်များနှင့် ရောင်းချသူများ လုံခြုံ ကျန်းမာခြင်းကို Shop.com.mm မှ အထူးအလေးထားသော အချက်ဖြစ်သည်။
Shop.com.mm ၏ ဂိုထောင်များ၊ ရုံးခန်းများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ခြင်းများကို ရှောင်ကြည်ရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားပါသည်။ အလုပ်ချိန်တွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နီးကပ်စွာ မနေရန်နှင့် လက်များကို မကြာခန ဆေးကြောခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားပါသည်။
ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကိုယ်စားလှယ်များကို ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က အကြံပြု တင်းကြပ်သောကာကွယ်မှုများကို လိုက်နာစေပါသည်။ ဂိုဒေါင်ရှိ ဝန်ထမ်းအားလုံး၏ အပူချိန်နှင့် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင် အားလုံး၏ အပူချိန်သည် တစ်ရက်လျှင် နှစ်ကြိမ်မဖြစ်မနေ စစ်ဆေးပေးပါသည်။ ထို့အပြင် ပစ္စည်းပို့ဆောင်သူ များသည် ချမှတ်ထားသော A / B အချိန်ဇယားအတိုင်း လှည့်လည်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကို ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ရောင်းသူ၊ ဖောက်သည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ လုံခြုံစွာလဲလှယ်ပို့ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးပြီး လက်ဆေးဂျယ်လ်များကို ဆောင်ယူပြီး ပို့ဆောင်စေပါသည်
“ဝယ်လိုအားတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုတားဆီးဖို့ရန်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေမှာလည်း တင်းကြပ်တဲ့ သန့်ရှင်းမှုစံနှုန်းများနှင့် အညီ သန့်ရှင်းစွာဆောင်ရွက်နေပါတတယ်”လို့ Shop.com.mm မှ Managing Director,Frans Maas မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်…
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် Social Distancing များ ပြုလုပ်နေကြပြီဖြစ်သည့်အတွက် Shop.com.mm သည်လည်း e-commerce ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ရောင်းသူများအား ကူညီပေးရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ဝယ်ယူသူများ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို လုံခြုံစိတ်ချစွာပို့ဆောင်ပေးနိုင်ရန် တာဝန်အပြည့်အဝရှိပါသည်။
ဤတာဝန်ဝတ္တရားအတိုင်း Shop.com.mm မှ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုလျှော့ချရန် တင်းကြပ်သော စည်းကမ်းများနှင့်အရေးပေါ်အစီအစဉ်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
Previous Articleသင်္ကြန်မတိုင်မှီ ဘာပစ္စည်းတွေဝယ်ထားသင့်လဲNext ArticleCovid – 19 ကို ကာကွယ်ဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းများ
စာပေဝါသနာအိုးလေးများကိုပြောပြပေးမယ့် မေလရဲ့အကောင်းဆုံး စာအုပ် (၁၀) အကြောင်း